Tetikasa lala-mikodana Hisy By pass vaovao hampitohy an’Itaosy sy Fenoarivo
Tsy mitsaha-mitombo ny mponina eto Antananarivo. Toraka izany koa ny filàna toy ny lalana…
Fanalana ny mpivarotra amoron-dalana Ny Sinoa sy ny Karana aloha no tokony hofehezina …
Nitondra fanazavana mikasika ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana an’aliny eto amintsika ny profesora James Ratsima, filohan’ny antoko Asandratro ny fireneko.
Fokontany Anosibe andrefana I Misy mibodo ny taniny
Misy midobo ny tany misy ny fokontany Anosibe Andrefana I, kaominina Antananarivo Renivohitra.
Nitarika ny asa ny delegen’ny Boriborintany fahatelo, Hery Razafintsalama sy ireo mpiara-miasa aminy. Tafiditra indrindra ao anatin’ny vina 100 andron’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny hetsika. Teny ivelan’ny tsenan’Andravoahangy no nisantarana azy. Anisan’ireny ny teny amin’ny Mascar sy ny manoloana ny tsenan’Andravoahangy ary ny manodidina. Nesorina ireo mpivarotra amoron-dalana rehetra ary nampidirina ao anatin’ny tsenan’ny Etal. Ireo mpivarotra akoho ao anatin’ny tsena kosa dia hisy ny fandaminana izay hatao amin’ny famindrana azy ireo ao anatin’ny tsena ihany koa. Narahin’ny fanesorana sy fanadiovana ny loto misavovona naterak’ireo mpivarotra amoron-dalana ireo izany, indrindra ny manoloana ny CSBII. Nitohy tamin’ny fanasana izany, izay nataon’ny mpamonjy voina ary nofaranana tamin’ny fandrarahana ranom-panafody mamono mikraoba. Teo koa ny fanalana ireo fiara mijanona izay mibahana manery ny lalana sy ny fifamoivoizana. Mbola hiroso amin’ny fandaminana ireo mpivarotra solomaso koa ny boriborintany fahatelo amin’ny famindrana azy noho ny fanamboarana ny toerany hatao trano biriky. Tanjona amin’ny hetsika ny hanalana ny loto sy ny mpivarotra amoron-dalana ary ny hampihenana ny fitohanan’ny fiara eny an-toerana.